Kupindirana 'Hybrid Kufona System = Zvinoshamisa | Martech Zone
Muvhuro, ndakave nemukana wekushanya Kutaurirana kwavatori, teerera nekucherechedza maitiro avo muchiito, uye shandisa kuratidzwa kuzere kwaHey Otto - izwi uye web musangano musangano unoshandisa Kupindirana tekinoroji kumashure kwekupedzisira.
Makambani ane nzvimbo huru dzekufonera anoenda munzira mbiri dzakasiyana, dzingave michina yekushambadzira kutaura (ASR) masisitimu kana nekushandisa makamuri makuru anodhura evashandi vekufona. Iko kusheedzera kune IVR kunoshungurudza, uye iyo yekumirira nguva yemushandi kazhinji inoseka. Yangu yega pet pet peeve ndipo pandinosheedzera kuhurongwa, zvinoda kuti ndibaye nhamba yangu yeakaundi, uyezve mutengi anotsigira anomiririra (CSR) anondikumbira kuti ndidzore apo pandinozovawana pafoni.
Kudyidzana inzira yakasanganiswa inoshanda zvinoshamisa. Kana iyo ASR isingakwanise kunzwisisa mhinduro, zvinobva zvaendeswa kune Vanoongorora Vanovavarira. Idzi inyanzvi dzinogadzirisa maakaunzi akati wandei anotora mazwi ayo hurongwa hwaisakwanisa kuziva. Mhedzisiro mhedzisiro chiitiko chakapenya nekukurumidza kune mutengi! Panzvimbo pekunge iwe uchidzokorora katatu uye wozokundikana kukuisa pakubatirira… Vanoongorora Vanovavarira vanoteerera meseji yako vobva vatungamira nenzira kwayo.
Ini handikwanise kuenda mune zvakadzama, asi iyo routing uye manejimendi sisitimu yeVanovavarira Vanoongorora vacharova pfungwa dzako. Iyo inoshanda, ine yekusimbisa cheki, pamwe nemubairo unokurumidza kupindura nguva. Nzvimbo dzekufonera dzinogona kushanda nechidimbu chezviwanikwa uye kugadzirisa zvisingaite mamwe mafoni… nepo ichivimbisa zvese kunyatso uye nekugutsikana kwevatengi kugutsikana. Dzvanya kuburikidza kana iwe usingaone iyo Hei Otto vhidhiyo.
Hei Otto izwi, dandemutande uye iPhone inosanganiswa kunyorera pamwe nekudyidzana kuchiisimbisa. Tarisa uone vhidhiyo yeimwe yesarudzo dzepamberi muHy Otto, sekunge Otto adaidzira kune munhu anenge aripo kana kufambisa musangano wako kubva kune imwe foni kuenda kune imwe - pasina vanopinda vambozviziva!
Tags: asrcsrhesi ottovaongorori vezvinangwaKutaurirana kwavatoriIVR
Mar 24, 2009 pa 10: 27 PM
Handifunge kuti zvinoshamisa zvinoita runyararo mukudyidzana system. Kupindirana ndeyekusvetuka kwakawanda mberi mune yekufona nzvimbo tekinoroji uye kusanganisa kwevanhu & tekinoroji maitiro. Chero kambani ine hofisi huru yekufona inofanirwa kuongorora ichishandisa iyi system.
Mar 25, 2009 pa 9: 43 AM
Ndakave nekuratidzwa kuInternet tekinoroji pamberi (HotBox pizza zvakandiburitsa kunze nguva yekutanga yandaishandisa), asi musangano unoita kunge chishandiso chinotyisa chechiitiko chinoshamisa chemushandisi. Kwete UI senge izwi revanhu!
Mar 25, 2009 pa 9: 46 AM
Ndakave nekuratidzwa kune iyo Yekudyidzana system pamberi, HotBox pizza yakanyatsondiburitsa kunze nguva yekutanga yandaishandisa, asi musangano unoita kunge chishandiso chinotyisa kune chinoshamisa mushandisi chiitiko. Ini ndicha shandisa.
Mar 25, 2009 pa 3: 02 PM
Ndashevedza mu HotBox Pizza system zvakare - zvinoshamisa!